Amagilavu ​​efriji → Izingubo zesitolo esibandayo • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Amagilavu ​​efrijini ayingxenye ebaluleke kakhulu yemishini yamakhaza nezitolo ezibandayo. Izandla zivame ukuvezwa ukuthintana ngqo nezimpahla nemishini. Zivame ukuba ngaphansi kwesithwathwa ngenxa yokuvela obala kanye nokusebenza kwamazinga okushisa aphansi, umoya ovame ukwenzeka ngomswakama ophezulu. I-Frostbite imvamisa iqala ngokubomvu kwesikhumba, ngoba ukujikeleza kwegazi kuyasheshiswa ukufudumeza izingxenye ezipholile. Izimpawu ezilandelayo ubuhlungu, ukulunywa nokuzwa kwezandla ezivuvukalayo. Izinga leqhwa lincike esikhathini nezimo,
lapho isikhumba savezwa khona yimiphumela emibi yokushisa okuphansi. Amagilavu ​​ayisivikelo esiphelele emazingeni okushisa aphansi, futhi akuvumela ukuthi wenze imisebenzi yakho ngokukhululeka. Amagilavu isiqandisi imikhiqizo esezingeni eliphakeme ikuvumela ukuthi uvikele izandla zakho kwiqhwa, yingakho isitolo sethu sinikela ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kuphela evela kubakhiqizi abanconyiwe.
I-POLAR RANGE COLDSTORE Gloves amagilavu ​​okubanda nokugcina amakhaza
Amagilavu ​​wamafriji namakamelo abandayo TG2 XTREME COLDSTORE Gloves
Ukukhethwa okubanzi kwamagilavu ​​ochwepheshe kwenza amakhasimende azimisele ukuthenga imikhiqizo hhayi amagilavu ​​kuphela, kodwa futhi nalo lonke uhla lwezingubo zamakhaza nezitolo ezibandayo, akhetha kuzo ibhulukwe, amajakhethi noma izicathulo. Amagilavu ​​we-Fleece Drivers ashisayo angumkhiqizo ohlangabezana namazinga we-EN388. Amagilavu ​​e-orange TG1 Pro Coldstore awumkhiqizo onolwelwesi lwe-Thinsulate. Imodeli yamagilavu ​​e-Arctic Gold Coldstore noma amagilavu ​​e-Eisbaer Freezer ahlangabezana nezidingo ze-EN 511 / EN 388 - le yimikhiqizo ekhethiwe kusuka ekunikezelweni kwethu. Zonke izinhlobo zamagilavu ​​zichazwe ngokuningiliziwe ukwenza ukukhetha kube lula ngangokunokwenzeka.
Uboya Abashayeli amagilavu ​​ezishisayo
Amanani ahehayo nekhwalithi ephezulu
Inkampani yethu ihlinzeka ngokucubungula izitshalo, izinqolobane, izitolo ezibandayo, izinkampani ezisetshenziswayo, futhi lokhu kudala ama-oda amakhulu imikhiqizo. Ngenxa yalokhu, sikwazile ukuzivocavoca izaphulelo ezikhangayo kubakhiqizi bethu, okuholele kuzintengo zokuncintisana zamakhasimende. Ngokwengeziwe ikhwalithi ephezulu kwemikhiqizo kwenza amakhasimende amaningi anelisekile abuyele kithi, futhi lokhu kusivumela ukuthi sigcine amanani entengo okuthengwa kosonkontileka bethu esezingeni eliphansi.
Ngobuningi bezingubo nezindwangu, simaka nganoma iyiphi ihluzo, senza i-logo sisebenzisa indlela ukugqokwa kwamakhompyutha noma ukuphrinta isikrini. Sineyethu ipaki yemishini, esivumela ukuthi silandele inqubo yokumaka kuzo zonke izigaba zayo.
Amagilavu ​​wamafriji namakamelo abandayo TG1 PRO COLDSTORE
isitsha sezitolo ezibandayo namakhazaizingubo zokuzivikelaamagilavu ​​esiqandisiniAmagilavu ​​eColdstoreamagilavu ​​ngamazinga okushisa aphansiIgilavu ​​Lokumisa IgolideAmagilavu ​​wamahhalaUboya begilavuAmagilavu ​​wesitolo esibandayoamagilavu ​​ashisayo